दोस्रो प्राथमिकतामा परेकालाई फागुन २ गतेदेखि खोप लगाइने – Bikash Khabar
दोस्रो प्राथमिकतामा परेकालाई फागुन २ गतेदेखि खोप लगाइने
बिहिबार, २९ माघ २०७७ गते १५:३२ मा प्रकाशित	Author विकास खबर	Comment(0)	162 Views
काठमाडौं । सरकारले पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई फागुन २ गतेदेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको ‘कोभिशिल्ड’ लगाउने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले फागुन २ देखि ८ गतेसम्म दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई खोप लगाइने जानकारी दिए । दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई जिल्लाबाटै खोप प्रदान गरिने छ । पहिलो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिबाट बचेको खोप मन्त्रालयको दोस्रो प्राथमिकता परेका तीन लाख व्यक्तिलाई लगाइने उनले बताए । खोप अस्पताल र स्वास्थ्य संघसंस्थाबाट लगाइने भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले दोस्रो चरणका खोप अभियान नयाँ खोप आएपछि मात्र सञ्चालन गरिने बताए । नेपालमा अहिलेसम्म दुई लाख ७२ हजार ३४९ संक्रमित भएका छन् । नेपालमा दुई लाख ६८ हजार पाँच सय ४९ व्यक्ति निको र दुई हजार ४७ जनाको संक्रमणबाट निधन भएको छ ।
चिनियाँ खोप ‘भेरो सेल’ लाई नेपालमा अनुमति
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसविरूद्धको चिनियाँ खोप ‘भेरो सेल’ लाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ । चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्म कम्पनीले
महिला विदेश जाँदा सिफारिसका विषयमा निर्णय भएको छैनः अध्यागमन विभाग